Sidee Jabuuti u aragtaa xiriirka diblomaasi ee Kenya iyo Soomaaliya? | KEYDMEDIA ENGLISH
JABUUTI - Maxamuud Cali Yuusuf, oo ah wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti ayaa sheegay in dowladda Ismaaciil Cumar Geelle ay aad usoo dhaweynayso soo celinta xiriirka diblomaasi ee Soomaaliya iyo Kenya.
Qoraal kooban oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay maanta ayuu Wasiirka ku xusay in Jabuuti ay u aragto tallaabadan mid wanaagsan oo loo qaaday horumarka gobolka, xasiloonida iyo nabadda dalalka IGAD.
Jabuuti ayaa kamid ah dalalkii uu xumeeyay Farmaajo, isagoo ku eedeeyay inay cadowgeeda kala safatay kadib markii gudi xaqiiqo raadin ah oo IGAD usoo dirtay inay soo baaraan wararka sheegaya in Kenya ay Mandheera ku ku hubeynayso C/rashiid Janan warbixintii uu soo saarey ku beeniyay in eedeynta DF ay waxba kama jiraan tahay.
Sidoo kale, waxay DF ku eedeysay Jabuuti inay kamid noqday dalalkii taageeray warbixintii gudiga amniga iyo xasiloonida Midowga Afrika ee looga soo horjeestay muddo-kordhintii sharci darrada Farmaajo.
Si kastaba, Jabuuti waxay dareemaysaa in xasiloonida iyo wadajirka gobolka ay faa'ido ugu jirto dhamaan dowladaha, waxayna ugu baaqday Kenya iyo Soomaaliya inay ka shaqeeyaan soo celinta xiriirkooda.
DF ayaa shalay ugu baaqday Kenya inay dib u furto safaaradeeda Muqdisho, iyaduna ay furanayso mida ay ku leedahay Nairobi, si loo amba-qaado xiriir diblomaasi oo dhameystiran, islamarkaana lasoo celiyo isku socodka iyo ganacsiga labada dal.